Nzọụkwụ 10 na Ọrụ Nlekọta Ndị Nlekọta Ndị Na-arụ Ọrụ | Martech Zone
Nzọụkwụ 10 na Ọrụ Ndị Ahịa Na-egbuke egbuke
Tuesday, August 6, 2013 Tuesday, August 6, 2013 Douglas Karr
Anyị edeela banyere uto nke ndi ahia ndi mmadu n'oge gara aga, anyị na-aga n'ihu ịkwanye ndị ahịa anyị na ntụziaka ahụ. Ọrụ ndị ahịa na-elekọta mmadụ bụ atụmanya nke ndị ahịa gị na ohere dị egwu maka mbọ ahịa gị. Kedu ihe dị mma karịa inyere onye ahịa aka na ntanetị ihu ọha ebe onye ọ bụla nwere ike ịhụ nnukwu ụlọ ọrụ ị bụ?
Ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eme mkparịta ụka n'ịntanetị na ụdị na-abawanye kwa afọ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke ndị ọrụ mgbasa ozi ọhaneze ejiriwo ọrụ ndị ahịa na-elekọta mmadụ, gụnyere ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị gafere afọ 65. O di nwute, nsonaazụ a ka hapụrụ ọtụtụ ihe ịchọrọ. Naanị 36% nke ndị na-azụ ahịa na-eme ajụjụ maka ndị ahịa site na mkpesa mgbasa ozi mmekọrịta na-edozi nsogbu ha ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè.
Ihe omuma a site na Mmetụta Mmetụta, bu uzo uzo zuru oke maka ulo oru obula na acho ime ma obu meziwanye ndi ahia ha.
Tags: Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịaahịa nkwadoọrụ ndị ahịankwado mmadụsupport
O Kwesịrị Inwe Azụmaahịa Gị Na Pinterest?
Kedu ebe kachasị mma IT maka azụmaahịa m?